Kazakistan Taşımacılıkta Öncü Firma – RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya7 KazakhstanShirkadda hogaamisa Kazakhstan ee Gaadiidka
13 / 12 / 2019 7 Kazakhstan, GUUD, WADADA, Warqad Hordhac ah
Wadooyinka iyo gaadiidka badda ayaa muddo dheer ka mid ahaa jidadka ugu macquulsan ee gaadiidka adduunka. Sanadihii la soo dhaafay, shirkado badan oo saadka ayaa bilaabay inay shaqeeyaan sababtuna tahay in dalabka dhoofinta iyo dhoofinta labadaba ay gaareen heer aad u sarreeya sababtoo ah ballaarinta waddankeenna. Shirkadeena, oo qaaday talaabooyin muhiim ah dhulka iyo gudaha iyo gaadiidka badda, waxay dhex martay shirkadahan mudo dheer waxayna lasocto horumarada waaxda si dhaw ilaa iyo tilaabada koowaad ee waaxda waxayna hirgalisay dhamaan waxsoosaarka qaybta. wuxuu ka mid ahaa ururada maraakiibta dhifka ah.
gaar ahaan Waxaa loo dhoofiyaa Kazakhstan Arin logistics, oo ah mid ka mid ah shirkadaha gaadiidleyda ee ay doorbidaan shirkadaha dhoofinta dhoofinta dhoofinta alaabada ay ugu wacan tahay shaqooyinkooda kaladuwan, ayaa waxay leedahay khibrad aad u qibrad badan oo ku saabsan dhoofinta dhammaan noocyada alaabada laga soo saaray waddankeenna Kazakhstan. Shirkaddeenu waxay ka shaqeyneysay wadooyin badan sida gadiidka xamuulka qaada ee Kazakhstan, gaadiid xamuul oo qeyb ah, gaadiid culus oo aan culeys weyn laheyn iyo adeegyada haamaha qulqulka Shirkaddeena ayaa fulisa howlo gaadiid aan dhib lahayn oo aamin ah oo hoos imaanaysa kormeerayaasha gawaarida waaweyn ee casriga ah iyo kuwa shisheeye iyo darawalada khibrada leh. Shirkadeena, oo leh kala duwanaansho weyn oo la leh tartamayaasheeda waaxda gaadiidka, waxay macaamiisheeda siisaa adeeg tayo leh macaamiisheeda oo ay had iyo jeer kujiraan waajibaadka 7 / 24 fikirka shaqada.
Wadankeenu wuxuu ku yaalaa magaalooyin badan oo Istanbul, Ankara iyo Izmir, inta badan howlaha gaadiidka Shirkadaha Maraakiibta ee Kazakhstan Iyada oo ay hogaamineyso Araklık logistics, waxay ilaalisaa garaaca wadnaha. Shirkadeena waa mid ka mid ah shirkadaha gaadiidleyda sida aadka ah loo doorbidayo ugana doorbido waaxda maadaama ay tahay il laga helo macluumaadka dhammaan macaamiisheeda iyo jaalayaasheeda iyadoo khibradeeda ay ka heshay khadka Kazakhstan sanado badan. Shirkaddeenu waxay fulisaa shixnado sida ku xusan xaqiijinta warbixinta gawaarida iyo caymiska cmr ee dhoofinta iyo soo dejinta labadaba waxayna siisaa adeegyo saadka oo ku saleysan aaminaadda. Waxay siisaa wareejinta ama adeegga tooska ah ee dhammaan kooxaha xamuulka ah ee la qorsheeyay in laga soo raro Kazakhstan dhammaan waddamada reer Yurub iyada oo loo sii marayo gaadiidka ku sii socda dalkeena.
Cunto wargalin: gaadiid malatya
Shirkadda hogaaminaysa ee khadka cirifka Ruushka Shah Lojistik
Shirkadda Belarus-Russia-Kazakhstan Joint Venture ee Yurub-Gaadiidka Container Shirkadda
Kazakhstan: 5 Milyan Dollar Sannad Ayaa Ka Socda "Gaadiid Konteynar"
target Turkiga ee Available Tareenka cusub High Speed ​​Gaadiidka Freight Gaadiidka
Antalya 3 Mashruuca Tareenka iyo Gawaarida Xeebta ee loo gudbiyay YPK Approval
Jaamacadda Duurce waxay sii waddaa doorka hogaaminta horumarineed ee gobolka iyadoo la socota guddi xawaaladeed oo sarreeya